JPG Recovery - kabsado tirtiray, lumay JPG, PNG sawiro
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray JPG Images
Maalmahan, ku dhawaad ​​qoys kasta uu leeyahay cemara ah digital ah ama qalab silimar u qaadan sawirro ah. Waa run in aanad u baahnayn mar dambe in film sawiro qaataan sidii hore iyo cemara ka JPG ama jpeg photos qaadan kartaa in aad iyaga meel kasta oo badbaadiyo. Dhibaatada ugu wayni waxay tahay in kaarka camera si fudud ku badbaadin karto badan oo images, laakiin sidoo kale aad u sahlan in iyaga laga badiyay hawlaha aan habboonayn. Maxaa u malaynayeen in ay sameeyaan marka ay booqasho aan diyaarinta kasta? Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa la soo kabashada JPG .
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray / badiyay photos JPG?
, Sawir jpeg Guud ahaan, waxaa jira sababo kala duwan keenaya JPG laga badiyay, sida tirtirka shil ah, musuqmaasuqa ama kaarka geli karin, awooda failure, jeermiska fayraska iyo ka badan. No arrinta sawiro aad kaa lumay, sabab kasta ka sarreeya, Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , ayaa kaa caawin kara inaad dib aan khasaaro tayo kasta oo ay heli. Ma aha oo kaliya u qaabab image kor ku soo gudbiyo, taas oo barnaamijka file JPG taageertaa dib u soo kabashada ee qaabab kala duwan sida TIF, BMP, PNG, GIF, RAF, ERF, PSD, WMF, CR2, DNG, cayriin, NEF, saxda iyo in ka badan , iyo sidoo kale dib u soo kabashada oo muusiko ah iyo video qaab badan.
Iska row: Ka dib markii sawiro aad ka kaarka xasuusta, kaarka SD, ama kaararka kale laga badiyay, fadlan ha u isticmaalin in ay sawiro mar kale qaato, ama sawiro cusub, kaas oo hoos u dhigi doontaa soo kabashada guul sawiradaada. Haddii ka computer ama drives kale adag laga badiyay, aad sidoo kale ma u malaynayeen in ay ku riday wixii macluumaad cusub ilaa meeshii aad sawiro laga badiyay.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hoose si aad baarista photos lumay ka hor inta aanad bixin, waayo, soo kabashada. Soo qaado isku day ah! Waxaad ku dhameysan kartaa shaqo la tallaabooyin dhowr ah ilmaha.
Muhiim: Ha dejisan iyo rakibi ay arrintani ku soo kabashada file jpeg / JPG on disk ama xijaab meesha aad sawiro aad laga badiyay.
3 tallaabo inuu ka soo kabsado files JPG tirtiray
Aynu qaadan Recovey Photo ee Windows sida isku day ah oo sameyn ku soo kabashada JPG talaabo talaabo ah.
Step1. Haddii aad ku saabsan inuu ka soo kabsado lumay images jpeg / JPG ka camera digital, fiidiyo, telefoonka gacanta ama qalab kale oo la qaadi karo waa, marka hore in ay ku xirmaan your computer. Haddii aan si toos ah ku dhacay oo ku saabsan "Start" in la sii wado ka dib markii ay barnaamijka.
Step2. Dooro qalabka oo guji "Scan" si loo ogaado in aad sawiro lumay ka. Haddii qalab aan, fadlan dooro Risaalo meesha aad badiyay file JPG aad, oo waxaad u tagtaan "Scan".
Step3. Marka scan ka baxayo, dhammaan faylasha recoverable waxaa la helay, oo ay ku jiraan faylal cod ah, sawiro iyo videos. Si aad u hesho sawiro JPG, aad si toos ah u tegi kartaa "Photo" category, heli "JPG" folder oo hubi in "Ladnaansho" iyaga.
Maxay waa in aad fiiro waa: Mar kale ha badbaadiyo files JPG soo kabsaday on disk asalka ama qalab, sababtoo ah files cusub overwrite doona faylasha lumay. Haddii ay jirto wax files maqan, weli waxaad haysataa fursad labaad si scan iyo kabsado iyaga.
Siduu u USB Toshiba Flash Drive Recovery